“Waxaan jeclaan lahaa in sanadkan uu noqdo sanadkeyga”….Denis Suárez – Gool FM
“Waxaan jeclaan lahaa in sanadkan uu noqdo sanadkeyga”….Denis Suárez
Dajiye July 25, 2018
(Barcelona) 25 Luulyo 2018. Denis Suárez ayaa xaqiijiyay inuu go’aansaday inuu naftiisa ku cadaadin doono sida uu boos kaga heli lahaa shaxda tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde xilli ciyaareedka cusub.
24 jirkan ayaa ku guuldareystay inuu ku qanciyo Valverde qaab ciyaareedkiisa si uu booq kaga helo shaxdiisa xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna nasiib u yeeshay inuu kasoo muuqdo kaliya daqiiqado kooban.
Ciyaaryahanka khadka dhexe reer Spain ayaa sheegay in loo baahan yahay inuu talaabo qaado hadii uu doonayo inuu boos ka helo Barcelona xili ciyaareedka soo aadan.
“Wuxuu iga codsan doonaa inaan talaabo hore u qaado, Waan ogahay inay muhiim tahay inaan qaado talaabo, waxaana aaminsanahay inaan awood u leeyahay inaan sidaas sameeyo”.
“Waxan xili ciyaareedka lasoo gali doonaa xiisa weyn, waxaan jeclaan lahaa in sanadkan uu noqdo sanadkeygii iyo inaan heysto kaalmo ka badan xilli ciyaareedkii hore”.
“Ujeedkeygu waa inaan halkan joogo, waxaan isku dayi doonaa inaan ka dhaadhiciyo bilowga waxa aan qaban karo”.
RASMI: AC Milan oo xaqiijisay in Leonardo uu dib ugu soo laabtay
Real Madrid oo go’aamisay mustaqbalka goolhaayaheeda reer Costa Rica Keylor Navas